LG အကြောင်းသတင်းများ - ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
LG Wing ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာနှင့်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုဖြင့်တရားဝင်ပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုမှာလှည့်နိုင်သည်
LG Wing သည်ရှေ့ကင်မရာနှင့်နှစ်ဆမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာထဲကတစ်ခုလှည့်သည်။
LG က "Wing" ကို dual-screen ဖုန်းရဲ့အမည်အဖြစ်အတည်ပြုလိုက်သည်
Wing လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး LG ကစက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။
Snapdragon 92G ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူလာသည့်တောင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ LG Q765 သည်အလောင်းအစားသစ်
LG Q92 ဟုခေါ်သော Snapdragon 765G စွမ်းအားဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။
LG K31 သည်စျေးပေါသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်ပြီးကင်မရာနှစ်လုံးနှင့် HD + မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်
LG K31 သည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်စမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်ပြီး Android 10 နှင့် Mediatek's Helio P22 chipset ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
LG Velvet သည် Snapdragon 845 နှင့်အထက်တရားဝင်ဖြစ်သည်
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှအဆင့်မြင့်ဖုန်း LG Velvet ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
LG Q92 5G သည် Google Play Console ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
LG Q92 5G သည် Google Play Console ကို ဖြတ်၍ ပထမဆုံးနည်းပညာအသေးစိတ်ကိုပြသသည်။ LG Velvet ထက်စျေးသက်သာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်လိမ့်မယ်။
LG V60 ThinQ 5G ၏ကင်မရာသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘဲနှစ်သက်စရာများစွာကျန်နေသည်။
LG V60 ThinQ ကင်မရာကို DxOMark ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ကစမ်းသပ်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့ကသိပ်မကောင်းဘူးလို့ကောက်ချက်ချကြတယ်။
Geekbench မှ Snapdragon 845 ပါ ၀ င်သည့် LG Velvet ကိုတွေ့မြင်ရသည်
LG Velvet အမျိုးအစားသစ်တစ်မျိုးကို Geekbench မှမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော CPU နှင့်အတူတူဖြစ်ပြီး 5G ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲစျေးကွက်များအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် LTE မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။
LG သည်၎င်းအားနောက်ဆုံးပေါ်လိင်အရလိင်ဆိုင်ရာကြော်ငြာလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်အတူတကွပူးပေါင်းထားသည်။ ပိုက်ကွန်သည်ပူ၏။
LG သည်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောမြင့်မားသောလိင်အရအခွင့်အရေးနှင့်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါ
LG Q61 - ကင်မရာလေးလုံးနှင့် ၆.၅ လက်မအရွယ်ရှိအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်တစ်ခု
LG သည် Q61 ဖုန်းသစ်ကိုယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်အပြိုင်အဆိုင်ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
စိတ်ကူးမှာ multimedia content ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် LG ဖုန်းမှ screen နှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
LG Velvet: ကိုရီးယားမှာကြိုတင်မှာယူမှုများစတင်ပါ
LG ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်သစ် LG Velvet ကိုမှာယူနိုင်ပြီဆိုတာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရသိရပါတယ်။
LG Velvet ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ရရှိနိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုသိရှိနိုင်သည်
LG Velvet ကိုတောင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Snapdragon 765G chipset ပါရှိသည်။
LG Velvet: ထုတ်ကုန်၏ရက်စွဲ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကပေါက်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်
LG Velvet ၏ Snapdragon 765 chipset ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ပစ်လွှတ်သည့်ရက်စွဲကိုလည်းပေါ်လာပါပြီ။
LG Velvet: တရားဝင်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုသည်ဒီဇိုင်းကိုပြသပြီး၎င်းသည် Snapdragon 765 ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
LG ကလာမယ့် Velvet ထုတ်ကုန်ကိုအသစ်ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်စတိုင်ကျသောဒီဇိုင်းနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။
LG G7 ThinQ သည် VoWiFi ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုရရှိသည်
LG G7 ThinQ သည် VoWiFi ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့် software update အသစ်ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
LG သည်၎င်း၏အောင်မြင်သော LG Chocolate line ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
LG သည် ၂၀၂၀ တွင်လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်ကျော်ကစျေးကွက်တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည့်သီးသန့် LG Chocolate လိုင်းပေါ် အခြေခံ၍ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုပြသမည်
LG Velvet သည်နောက်လာမည့်စမတ်ဖုန်းအတွက်နာမည်အသစ်ဖြစ်သည်
LG က Velvet အမည်ရှိလာမည့်နောက်ထုတ်ကုန်မှာစျေးကွက်ထဲရှိစမတ်ဖုန်းများမဟုတ်ဘဲအခြားဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG Style3 ကိုဂျပန်၌မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Snapdragon 845 ပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်ဖုန်းတစ်လုံး
LG ကဇွန်လမှရောက်ရှိလာမည့်အလယ်အလတ်တန်းစား Style3 အမည်ဖြင့်ဂျပန်အတွက်ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကိုကြေညာခဲ့သည်။
LG က G9 အတွက်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုကြေညာခဲ့သည်
LG ကုမ္ပဏီသည်နည်းပညာနယ်ပယ်အမျိုးမျိုး၌နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့သည်။ ပြီးတော့စမတ်ဖုန်းကဏ္inမှာ ...
LG G9 ThinQ သည် SoC Snapdragon 765G နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်
LG G9 ThinQ နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကစမတ်ဖုန်းသည် Snapdragon 865 နှင့်မဟုတ်ဘဲ Snapdragon 765G နှင့်အတူရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။
LG Q51 ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ Triple camera နှင့် stereo speakers
LG က Q51 လို့ခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာအသစ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးကိုရီးယားစျေးကွက်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဖုန်း။
LG V60 ThinQ 5G သည် Snapdragon 865 နှင့် Dual Screen Display ဖြစ်သည်
LG ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Snapdragon 60 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ dual-screen ဖုန်း V5 ThinQ 865G ကိုကြေညာခဲ့သည်။
LG W10 Alpha သည်ဈေးသက်သာပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောစမတ်ဖုန်းသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
LG သည်အနိမ့်ဆုံးစမတ်ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းထဲသို့ထပ်မံဝင်ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည် W10 Alpha အသစ်ဖြစ်သောမျှမျှတတကျိုးနွံသောပုံစံနှင့်ယခုပြုလုပ်သည်။
LG V60 ThinQ ၏ရုပ်ပုံများသည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးမိုဘိုင်း၏အသွင်အပြင်များစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည်
LG V60 ThinQ ၏ပုံဖော်ထားသောရုပ်ပုံများသည်စမတ်ဖုန်း၏အဓိကရှုထောင့်များစွာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
coronavirus ကြောင့် LG သည် MWC 2020 သို့တက်ရောက်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည် MWC 2020 သို့တက်ရောက်ခြင်းမရှိသူနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမီဒီယာသို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်
LG G8 ThinQ ၏သော့ဖွင့်ထားသောယူနစ်များသည် Android 10 ကိုဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်သည်
အဆင့်မြင့် LG G8 ThinQ ၏သော့ဖွင့်ထားသောယူနစ်များသည်ယူအက်စ်တွင် Android 10 update ကိုလက်ခံရရှိနေသည်။
LG Mobile သည်အလယ်အလတ်တန်းစားကဏ္demandတွင် ၀ ယ်လိုအားနည်းပါးခြင်းကြောင့်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုတရားမျှတစေသည်
အခိုးခံရသည့်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုကုမ္ပဏီကဂရုမစိုက်ပါ။ ၀ ယ်လိုအားနည်းနေသောကြောင့် LG သည်ရောင်းချခြင်းမရှိကြောင်းတရား ၀ င်ပြောကြားခဲ့သည်။
LG G9 ThinQ၊ လာမယ့်အထင်ကရကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာ
LG G9 ThinQ သည်တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီအဆင့်များလောင်ကျွမ်းသွားသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ထင်ရှားသောယိုစိမ့်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
LG က၎င်း၏စမတ်ဖုန်း ၉ ခုအတွက် Android 10 update ကိုကြေငြာခဲ့သည်
LG စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်ကိုးခုသည် Android 10 update ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
LG G10 ThinQ အတွက် Android 8 update ကိုတိုးချဲ့
အဆင့်မြင့် LG G8 ThinQ စမတ်ဖုန်းသည် US ၌ Android 10 update ကိုတိုးတက်မှုများစွာဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
LG W20 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Google Play Console ဒေတာဘေ့စ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသည်
Google Play Console ဒေတာဘေ့စ်တွင် LG W20 ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
တည်ငြိမ်သော Android 10 ကို LG V50 တွင်စတင်ရောင်းချ
LG V50 သည် Android 10 operating system ကို၎င်း၏တည်ငြိမ်သောပုံစံဖြင့်ဖြည့်စွက်သည့် update ကိုကြိုဆိုသည်။
Geekbench မှာ LG ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ သူက LG K43 အဖြစ်ရောက်လာနိုင်တယ်
Geekbench စမ်းသပ်မှုပလက်ဖောင်းသည် LG K43 နှင့်ကိုက်ညီမည့်၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်စာရင်းအသစ်တစ်ခုတင်လိုက်သည်။
LG သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းဌာနခွဲဈေးကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် LG သည်မိုဘိုင်းဌာနခွဲရှိဆုံးရှုံးခဲ့ရသောစျေးကွက်အများစုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်စီစဉ်နေသည်။
ဤအမှုများသည် LG G9 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်
အမှုများစွာက LG G9 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖန်သားပြင်လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့်ကင်မရာ ၄ လုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
LG G9 သည် quad ကင်မရာပြန်ဆိုချက်များတွင်ဖော်ပြသည်
LG ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် G9 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကဒီနှစ် MWC မှာအလင်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပြနေတယ်။
LG Neon Plus ၏အခြေခံဖုန်းပေါက်ကြားမှု
LG မှထုတ်လုပ်လိုက်သောလာမည့်ဖုန်း၏ rendering ပေါ်လာသည်။ ၎င်းကို LG Neon Plus ဟုခေါ်တွင်ပြီး CES 2020 တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
LG V60 ThinQ 5G ကို MWC 2020 တွင်ကြေညာမည်
LG သည် V50 ThinQ 5G ကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်ဖြန့်ချိမည်။ ကုမ္ပဏီမှ V2020 ThinQ 60G ကိုကြေညာမည်။
LG G7 One သည် Android 10 update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
LG G7 One သည်အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းကအရေးကြီးဆုံး Android update ဖြစ်သော version 10 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤ terminal သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်၌ရောက်ရှိခဲ့သည်။
LG G8X ThingQ ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
ယခုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှ LG G8X ThinQ အသစ်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG ၏ Android 10 beta ပရိုဂရမ်ကိုအောက်တိုဘာလကုန်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းအမြောက်အမြားကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။
LG က Android 10 beta ကိုအောက်တိုဘာလကုန်မှာစတင်မိတ်ဆက်မယ့် preview program ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Verizon ၏ LG V30 သည်နောက်ဆုံး၌ Android Pie ကိုရရှိခဲ့သည်
Verizon ၏အဆင့်မြင့်ဝါရင့် LG V30 သည် Android Pie operating system ထည့်သွင်းထားသော software update ကိုရယူနေသည်။
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်အရ ၁၀.၁ လက်မ LG G Pad5စမတ်ဖုန်းကို Qualcomm ၏ Snapdragon 10.1 chipset နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
LG G8X ThinQ သည် IFA 2019 တွင်တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သည်။
LG Style5ကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
LG Stylo5ကိုယခုအခါ US တွင်တရားဝင် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးယခုဖော်ပြလိုက်သောစျေးနှုန်း။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သော LG Q70 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုရှာဖွေပါ။
LG K40S နှင့် LG K50S အမှတ်တံဆိပ်၏စတင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
LG K40S နှင့် K50S, ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်နိမ့်မော်ဒယ်များကိုအသစ်ပြန်လည်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည်။
LG V60 ThinQ တွင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိသည်
စက်တင်ဘာလတွင်ဘာလင်ရှိ IFA 60 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန်၌ဤ LG V2019 ThinQ မျက်နှာပြင် dual မျက်နှာပြင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
IFA 8 မှာတရားဝင်ပြသတော့မယ့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှအဆင့်မြင့်ဖုန်းသစ် LG G2019X ThinQ အကြောင်းလေ့လာပါ။
LG K50 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
LG K50 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတရားဝင်ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
LG ကစက်တင်ဘာလတွင် dual-screen ဖုန်းများထုတ်လုပ်မည်
ခဲတံပါသောခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းကိုပြသပြီး၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်သော LG ဖြစ်နိုင်ကြောင်း LG ၏မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် LG ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဖုန်းလုပ်ငန်းတွင်ပိုက်ဆံထပ်မံဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG K20 နှင့် LG K30: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောအသစ်စက်စက်
LG K20 နှင့် K30 နှင့်ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။ အီတလီမှာတရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးမကြာမီရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
LG V30 သည် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်မှုကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
အချို့သောစျေးကွက်များ၌ LG V30 သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည့် Android Pie သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
2 LG X2019 ၏မြင်ကွင်းတွင်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ဒီဇိုင်းကိုပြသထားသည်
LG X2, LG ၏နောက်ထပ်စျေးပေါသောဖုန်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုသောပုံရိပ်တစ်လုံးပေါက်ကြားခဲ့သည်။
LG သည် V60 နှင့် V70 တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်
LG သည်၎င်း၏ high-end သစ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးတောင်ကိုရီးယားတွင် V60 နှင့် V70 ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ မှစတင်၍ ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် LG M10 အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါကစျေးကွက်၌ဖုန်းအသစ်များစတင်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုဆိုလိုသည်။
LG သည် G10, G20, G30 နှင့် G40 အမည်များကို၎င်း၏လာမည့်ဖုန်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသည်
လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည့်လာမည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအတွက် LG မှတ်ပုံတင်ထားသောအမည်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Stylo 5: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level range
LG Stylo5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တရားဝင်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဆွဲတံနှင့်အသစ်နိမ့်ဆုံး။
LG G8s ThinQ Smart Green ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချ
စပိန်နိုင်ငံတွင် LG G8s ThinQ Smart Green စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
LG W10, LG W30 နှင့် LG W30 Pro - အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သည်
LG W10, W30 နှင့် W30 Pro အသစ်များအကြောင်း LG မှမကြာမီအိန္ဒိယတွင်တရားဝင်ကြေညာတော့မည်ဖြစ်သည်။
တူရကီမူပိုင်ခွင့်အင်စတီကျုက LG Electronics ကိုစမတ်ဖုန်းတစ်ခုအတွက်ရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့အပေါက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။
LG W10 ကို Android Enterprise တွင်တွေ့ရပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်
LG W10 သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Google ၏ Android Enterprise ပရိုဂရမ်ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်။
LG V50 ThinQ 5G ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
စပိန်နိုင်ငံရှိ LG V50 ThinQ 5G ၏တရားဝင်ဖြန့်ချိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းတွင်စျေးကွက်အတွင်း Vodafone မှစတင်မိတ်ဆက်သည်။
LG W10 သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းဖြစ်သည်
LG W10 အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည်အချိန်တိုအတွင်းအိန္ဒိယတွင်သီးသန့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
LG V50 ThinQ 5G လွှတ်တင်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်
LG သည် Qualcomm နှင့်အတူ chipset ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းအချို့ကြောင့် V50 Thinq 5G ကိုဆက်လက်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
LG Stylo5ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီမြင်တွေ့ရသည်
LG Stylo5သည်ဈေးကွက်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိရန်နီးစပ်နေသည်။ ဒီပစ္စည်းဟာပုံရိပ်အသစ်တွေမှာကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုလုံးဝမြင်တွေ့ရပါတယ်။
LG G7 သည်ဥရောပရှိ Android Pie ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
နောက်ဆုံး၌ဥရောပနိုင်ငံ၌ LG G7 ThinQ အတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Android Pie အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းကိုထပ်မံရှာဖွေပါ။
အိန္ဒိယတွင်သီးသန့်စတင်ထွက်ရှိမည့် LG ၏ပထမ ဦး ဆုံးသော LG ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Q60 ကိုတရားဝင်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သောစပိန်တွင် LG Q60 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG G8 ThinQ သည် DxOMark တွင်ကင်မရာနိမ့်သည်
LG G8 ThinQ ကို DxOMark ကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအများပြည်သူမြင်နိုင်သည်။ ဆိပ်ကမ်းရရှိသောရမှတ်သည်အလွန်မကောင်းပါ။
LG G8 သည်ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုခံလိုက်ရသည်
LG G8 သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် JerryRigEverything ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းသည်ပျံသောအရောင်များဖြင့်ဤစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
LG V50 ThinQ 5G တွင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ရှိသည်
ဒီ LG V50 ThinQ 5G ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာစတင်ရောင်းချချိန်မှာရရှိမယ့်စျေးနှုန်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပိုမိုရှာဖွေပါ။ ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲအပြင်။
LG သည် LG V35 ကို Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်တော့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည်သန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။
LG X4 2019 အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်
တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှ LG X4 2019 အသစ်ဖြစ်သောနိမ့်ကျသည့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG မှာမူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာကြည့်ပါကကင်မရာခြောက်လုံးပါ ၀ င်သည်။
DxOMark သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမိုဘိုင်းရရှိခဲ့သည့်စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်ကိုက်ညီသော LG V40 ThinQ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအားအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လည်ပတ်နေသည့်ခေါက်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမတ်ဖုန်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သော LG မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG K40 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
LG K40 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Android Pie သည်မည်သည့်အချိန်တွင် high-end ရရှိမည်ကို LG အတည်ပြုခဲ့သည်
LG မှ Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိမည်။
LG V50 ThinQ 5G ဈေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှုကိုကိုရီးယားတွင်အတည်ပြု
တောင်ကိုရီးယားရှိ LG V50 ၏စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်ကိုကုမ္ပဏီမှတရားဝင်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG K12 +: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ပါးသောစမတ်ဖုန်းအသစ်
တရား ၀ င်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level ဖုန်းသစ် LG K12 + အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ LG G8 ThinQ ကိုinပြီလ ၁၁ ရက်မှာယူနိုက်တက်စတိတ်မှာရောင်းချမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
LG V50 5G: LG ၏ပထမဆုံး 5G စမတ်ဖုန်း
LG V50 5G, MWC5တွင် 2019G ပါ ၀ င်သည့်ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
LG G8 ThinQ - ကိုရီးယားတံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်
LG G8 ThinQ, MWC 2019 တွင်သတ်မှတ်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Q60: နောက်ကင်မရာသုံးဆနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်
LG Q60 ၏အနောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ
LG K40 နှင့် LG K50 - စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသောအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
တရား ၀ င်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သော LG K40 နှင့် LG K50 သည် LG အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စတိုးဆိုင်များတွင်ဖြန့်ချိသည်အထိခဏစောင့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သော၎င်း၏ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းဖြင့် LG ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V50 ThinQ 5G ၏ Render သည်၎င်း၏အသွင်အပြင်အားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
LG သည်လာမည့်ရက်များအတွင်း V50 ThinQ 5G ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ တရားဝင်ပြန်ဆိုသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်အတိအကျနှင့်အတူယင်း၏ပြန်ဆိုချက်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
တရားဝင်: LG G8 ThinQ တွင်အသံနည်းပညာဖြင့် Crystal Sound OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Mobile World Congress (MWC 8) တွင် LG က၎င်း၏အသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း LG G2019 ThinQ ကိုအဆုံးသတ်တော့မည်။
LG G8 ThinQ ၏ rendering အသစ်သည်အထင်ရှားဆုံးသောအသွင်အပြင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
LG G8 ThinQ ၏ rendering အသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီဖုန်းကဖုန်းရဲ့ထောင့်တွေအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ပြီးအီဗန်ဘလပ်စ်ကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တယ်။
LG G8 ThinQ ၏စျေးနှုန်းကို 128 GB Internal Memory ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်
LG G8 ThinQ မစတင်မှီကနေဒါ၏စျေးနှုန်းမှာပေါက်ကြားခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် LG K12 + ၏ရှေ့ဒီဇိုင်းကိုစစ်ထုတ်သည်
LG K12 + ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကဲ့သို့ rendering မှတဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
LG G8 ThinQ တွင်ရှေ့မျက်နှာဖုံးကင်မရာနှင့် 3D မျက်နှာမျက်နှာပြင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများရှိသည်
LG က၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် G8 ThinQ သည် selfies အတွက် 3D ToF sensor ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, LG ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားရှိနေပေမယ့်မိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ
LG Electronics ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Qiao Yujin မှကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မကြာမီအချိန်အတွင်းမိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုစွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
LG ၏မိုဘိုင်းဌာနခွဲသည် ၂၀၁၈ တွင်ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်
LG ၏မိုဘိုင်းဌာနခွဲ၏ရလဒ်သည်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခန့်အရှုံးအမြောက်အမြားကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ လောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
မူပိုင်ခွင့်အသစ်အသစ်တစ်ခုကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည် waterdrop notch နှင့်အတူထုတ်ကုန်တစ်ခုစတင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
LG V50 ThinQ 5G ကို Sprint လေကြောင်းလိုင်း MWC 2019 တွင်ကြေညာမည်
LG သည်၎င်း၏ G 'နှင့်' V 'စီးရီးများအတွက်ဘာစီလိုနာရှိ MWC 2019 တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုပြသရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ LG G8 နှင့် V50 ThinQ 5G ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။
LG V40 ThinQ ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
LG V40 ThinQ ၏တရားဝင်ရောင်းချမှုကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်တရားဝင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတရားဝင်ကြေငြာမည်ဖြစ်သည်။
Autofocus သည် ARCore mode နှင့် LG high-end တော်တော်များများတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Google အတည်ပြုသည်
ARCore ၏ autofocus သည် LG flagship စမတ်ဖုန်းများနှင့်မတူပါ။ ၎င်းကို Google မှအတည်ပြုခဲ့သည်
5G နည်းပညာကိုစောင့်နေတုန်း LG က 6G network အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြီ
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG မှ 6G နည်းပညာအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကဏ္ in ၏ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
LG ကသူ၏ဖုန်းလုပ်ငန်းကိုဖိလစ်ပိုင်တွင်ပိတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Sony နှင့် HTC တို့သွားနေသလား။
ထိပ်တန်းနည်းပညာများရှိသောစမတ်ဖုန်းများကြေငြာချက်များစွာအရ LG သည်ဖိလစ်ပိုင်ရှိမိုဘိုင်းကဏ္inတွင်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပေးသောမျက်နှာပြင်သည်မျက်နှာပြင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်အာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ရှေ့ကင်မရာအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေလိမ့်မည်။
LG က MWC အတွက်မိုဘိုင်းတစ်ခုပြင်ဆင်ပေးပြီးသင်ကထိစရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်
MWC 2019 တွင်လာမည့်လတွင်ဘာစီလိုနာ၌ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းဖုန်းကိုထိစရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်မည့် LG ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Android Pie သို့အသစ်ပြောင်းမည့် LG ဖုန်းများ
ဒီနှစ်တစ်လျှောက်လုံး Android Pie ကိုတရားဝင် update လုပ်မယ့် LG ရဲ့ LG ဖုန်းစာရင်းကိုရှာဖွေပါ။
LG G7 ThinQ သည် Android Pie သို့စတင်မိတ်ဆက်သည်
တောင်ကိုရီးယားရှိ LG G7 ThinQ သို့စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော Android Pie update ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V20 နှင့် G5 သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းများမရှိတော့ပါ
LG V20 နှင့် G5 စမတ်ဖုန်းများသည်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ လုံခြုံရေးနှင့်အခြားအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုနောက်တဖန်မခံတော့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG Q9: LG ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသက်တမ်းတိုး
LG Q9: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ရောင်းချမှု။ တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်သည့် LG ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG မှ G8 ကို On-screen sound technology ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုအစီရင်ခံစာအသစ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Samsung သည်၎င်းကို၎င်း၏အနာဂတ်ဖုန်းများအတွက်လုပ်ဆောင်သည်။
LG G7 ThingQ အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Android Pie ကိုမိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့သည်
LG G7 ThinQ ကိုသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ် Android Pie ကိုတစ်ပါတ်အောက်တွင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LG သည်အလယ်အလတ်တန်းစားတက်ဘလက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီး Q2019 XNUMX တွင်စတင်ဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
LG G7 ThinQ ကို Android9သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်မကြာမီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်
LG က G7 ThinQ ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Google ၏ operating system သို့အဆင့်မြှင့်တင်တော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Android9Pie ကဒီမှာပါ။
LG က၎င်း၏ 2019 ပစ်လွှတ်ထုတ်ဖော်ပြသ
2019 ၏ပထမလများအတွင်း၌စမတ်ဖုန်းအသစ်များကို LG တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့် LG ၏အစီအစဉ်နှင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG G8 ThinQ ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုမြင်တွေ့ရမည့်ကြီးကျယ်သောထုတ်လုပ်သူများ၏နောက်ထပ်အထင်ကရအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတဖြည်းဖြည်းလေ့လာသင်ယူနေပါသည်။
LG ဖုန်းများပေါ်တွင် Pixel3ကင်မရာ port ကို download လုပ်၍ မည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း
Google Pixel3Camera Port ကို LG အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲဆိုတာရှင်းပြတယ်။
LG G7 Fit ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိ
LG G7 Fit ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင် ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းမှာ ၀ ယ်ယူနိုင်တော့မည့်ဈေးနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
LG V40 ThinQ သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်။ ကင်မရာငါးခုပါ ၀ င်သည်
LG V40 ThinQ: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရား ၀ င်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေပါ။
LG V40 သည် Geekbench တွင် Android 9.0 Pie မပါရှိပါ
LG V40 သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ Geekbench Benchmark တွင်ပေါ်လာသည်။ တောင်ကိုရီးယား၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG G5 သည် Android Oreo ကိုစတင်ရရှိသည်
LG G5 မှဝါရင့် LG GXNUMX သည် Android Oreo ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်နေသည့် update ကိုကိုရီးယားတွင်ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
LG V40 ThinQ ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
LG V40 ThinQ ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီဖုန်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကငါတို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ပါ။
LG V40 ကိုအောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်ပြသမည်
LG သည် LG V40 ကိုအောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်တောင်ကိုရီးယား၌မိတ်ဆက်မည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အဆင့်မြင့်အကွာအဝေး၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Q Stylus Plus ကို ၆.၂ လက်မ 18:9မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
LG Q Stylus + ကိုအိန္ဒိယတွင်ရူပီး ၂၁,၉၉၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီစက်ပစ္စည်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိထားပါ။
LG Q9 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအများအပြားပေါက်ကြားခဲ့သည်
LG Q9 ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မကြာမီတင်ပြတော့မည့်ဤကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V40 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
LG V40 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပေါက်ကြားပြီးသားအမှတ်တံဆိပ်၏ high-end အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
LG G7 One - LG ရဲ့ပထမဆုံး Android One Phone
LG G7 One - Android OS ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပထမဆုံး LG Mobile ။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှဤဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V40 ၏ဒီဇိုင်းသည်ဗီဒီယိုတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
ဗီဒီယိုတွင် LG V40 ၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရောက်ရှိလာမည့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V5 ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံတွင်ပါသောကင်မရာ ၅ လုံးနှင့်မပိုသည်
LG V40 ကိုနို ၀ င်ဘာလမှာတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးအခုကင်မရာအရေအတွက် ၅ ခုလောက်သာပေးနိုင်သောပထမဆုံးပုံရိပ်ထွက်လာသည်။
LG V40 ကိုတောင်ကိုရီးယားတွင်အောက်တိုဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည် ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရောက်ရှိလာမည့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V40 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
LG V40: အနောက်ဘက်ကင်မရာနှင့် notch ၏ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ထုတ်ထားသောပုံများတွင်။ မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့် high-end LG ၏ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
LG ကကြိုးမဲ့နားကြပ်ကို Google Assistant အတွက် Button ဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
LG သည် Google Assistant ၏နားကြပ်အသစ်တွင်ခလုတ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ LG မှဤကြိုးမဲ့နားကြပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG သည်နောက်နှစ်အတွက် 5G ဖုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
LG သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
LG Q8 (2018) - ရေစိုခံအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
LG Q8 (2018) - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အလယ်အလတ်တန်းကိုစတင်ခြင်း။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V20 သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်မှုကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
LG V20 ကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ကန ဦး ရရှိပြီးနောက်စျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် LG သည် VXNUMX ကို Android Oreo သို့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား၌တည်၏။
LG သည် LG V90 အမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်
LG သည်အနည်းဆုံးမျိုးဆက်သစ် ၅ မျိုးဆက်အားစတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှ LG V90 ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ
LG V40 ThinQ ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်
LG V40 ThinQ: အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ စက်တင်ဘာလတွင်ကြေငြာမည့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှအဆင့်မြင့်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Q7: LG ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်စပိန်သို့ရောက်ရှိလာခြင်း
LG Q7 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်။ စပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
LG Q6 သည် Android 8.0 Oreo ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
LG Q6 သည် Android 8.0 Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ တောင်ကိုရီးယားရှိသုံးစွဲသူများသည် Android Oreo update ကိုအံ့အားသင့်စွာဖြင့်ရရှိကြသည်။
LG သည်၎င်း၏ပထမဆုံးခေါက်ဖုန်းကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော၎င်း၏ပထမဆုံးခေါက်ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
LG G7 ၏နောက်ဆုံးသတင်းကဗီဒီယိုများကို 4k ဖြင့် 60 fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
LG ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် G7 သည်ဗီဒီယိုကို 4k ဖြင့် 60 fps နှုန်းဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်မည့် update ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
LG V40 တွင်ကင်မရာငါးခုတပ်ဆင်နိုင်သည်
LG V40 တွင်ကင်မရာငါးခုပါရှိသည်။ LG မှ high-end အသစ်အကြောင်းကင်မရာအနေနှင့်အကောင်းဆုံးကိုလောင်းကစားနိုင်မည့်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG Stylo 4: ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး Android One မှာ Snapdragon 450 နှင့်အတူရောက်လာသည်
LG Stylo4ကို LG မှတရားဝင်ပြုလုပ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယား၏ Android One ပါသောပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သော LG Stylo4ကိုတရားဝင်အဖြစ်မကြာမီ Google မှတိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့ပေးသော operating system ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး Android One ဖြစ်ပြီးရှစ် core Snapdragon 450 ပါရှိသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
LG က Android One နဲ့ LG Q7 မှာအလုပ်လုပ်မှာပါ
Android One ဖြင့် LG Q7 ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာမည့်ဗားရှင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG X5 (2018) အသစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က LG သည် LG X5 (2018) ကိုတိတ်တဆိတ်ကြေငြာခဲ့သည်။ LG ၏ကတ်တလောက်ထဲ၌အသစ်စက်စက်တပ်ဆင်ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက် LG X5 (2018) ကိုလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကြေညာခဲ့သည်။ အခုတောင်ကိုရီးယားကတ်တလောက်ထဲကိုပေါင်းထည့်လိုက်ပြီ။
LG Q Stylus, Stylus Alpha နှင့် Stylus Plus: ခဲတံပေါ်တွင်အလတ်စားကစားနည်းများ
LG Q Stylus, Stylus Alpha နှင့် Stylus Plus: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် Launch ။ တရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V35 ThinQ: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရား ၀ င်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG သည်ဇွန်လတွင် LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 နှင့် X2 ကိုမိတ်ဆက်မည်
LG သည် LG V35, X5 နှင့် X2 ကိုတောင်ကိုရီးယား၌ဇွန်လတွင်ဖြန့်ချိမည်။ ဇွန်လတစ်လလုံးတွင်သင့်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သူမှစီစဉ်မည့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG Q7 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုသိ!
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီး LG သည် LG Q7 ကိုစပိန်ပိုင်နက်သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မနေ့ကတင်ပြခဲ့သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်နေ့ရက်အတိအကျကိုဖော်ပြခြင်းမရှိသော်လည်း၊ နှင့်အတူစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောပါလိမ့်မည်။
LG Q7, LG Q7αနှင့် LG Q7 + - LG ၏ mid-range ကိုအသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်
LG Q7, LG Q7αနှင့် LG Q7 +: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ ဈေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှု။ ယနေ့တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော LG ၏အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG Q7 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
LG Q7: ပထမဆုံးဖုန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေါက်ကြားခဲ့ မကြာမီစျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သောကုမ္ပဏီ၏ Q range မှထုတ်ကုန်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စပိန်နိုင်ငံရှိ LG G7 ThinQ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
LG ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် LG G7 ThinQ သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအတွက်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
LG G7 ThinQ နောက်ခံပုံများရယူပါ
အကယ်၍ သင်သည် LG G7 ThinQ အသစ်၏နောက်ခံပုံများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဤအထင်ကရအသစ်၏လက်မှလာသည့်သီးသန့်နောက်ခံနံပါတ် ၃၃ ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
LG V35 ThinQ ၏ယိုစိမ့်မှုများ: LG V30S ThinQ၊ သင်ကဟုတ်လား။
LG V35 ThinQ ၏ပြန်ဆိုအမျိုးမျိုးမှာပေါက်ကြားသွားသည်။ အမျိုးမျိုးသောကောလာဟလများနှင့်သံသယများအရမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤ terminal သည် hardware အပိုင်းတွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုအားကောင်းသော SoC ကိုတွေ့နိုင်ပြီးကင်မရာများနှင့်ဘက်ထရီတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားတိုးတက်မှုများလည်းရှိလာလိမ့်မည်။
LG G7 ThinQ: ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာသည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်
LG G7 ThinQ: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG G7 ThinQ သည် GeekBench ကို 4GB RAM နှင့် Snapdragon 845 ဖြင့်ဖြတ်သန်းသည်
LG သည် LG G7 ThinQ အဆင်သင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မကြာမီတွင်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောမိုဘိုင်းကတ်တလောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပြတော့မည်။ ဤကိရိယာသည်မကြာသေးမီကကျော်ကြားသောစံနှုန်းဖြစ်သော GeekBench ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG က G7 ThinQ မျက်နှာပြင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
LG သည်၎င်း၏ G7 ThinQ ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် display ကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
LG G7 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံကိုစစ်ထုတ်သည်
LG G7 ThinQ - ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းဟာလုံးဝပေါက်ကြားသွားပြီ။ ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG G7 ThinQ တွင် Google Assistant အတွက်ကိုယ်ပိုင်ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်
LG G7 ThinQ တွင် Google Assistant အတွက်သီးသန့်ခလုတ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးမှထင်ပေါ်ကျော်ကြားစရာများပြားလှသော high-end ဖုန်းတွင်ရှိမည့်ခလုတ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG K11 နှင့် K9: ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ပေါက်အသစ်များကိုဥရောပသို့ရောက်ရှိသည်
LG K9 နှင့် K11: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ရောင်းချမှု။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ၄ င်းတို့၏ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
LG သည်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၏ကျေးဇူးကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော update များကိုပေးလိမ့်မည်
LG သည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတိုးတက်စေရန်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာကိုဖွင့်သည်။ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲအတွက်တိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်ဤစင်တာနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG V35 ThinQ ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
LG V35 ThinQ: ပထမအချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ high-end အသစ်၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnLeaks ၏ပြောကြားချက်အရကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည်မေလ ၂ ရက်နေ့တွင်နယူးယောက်၌ LG G7 Thinq ကိုတရားဝင်တင်ဆက်မည်။
LG G7 ၏ဒီဇိုင်းပြန်ပေါ်လာသည်။ notch ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်
LG G7 ၏ဒီဇိုင်းသည်ယိုစိမ့်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထပ်မံပေါက်ကြားခဲ့သော LG G7 ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။ high-end သည် notch ရှိလိမ့်မည်ကိုထပ်မံအတည်ပြုသည်။
LG သည် JoJo ၏ Bizarre စွန့်စားမှုမှလှုံ့ဆော်ပေးသော V30 Plus အားအထူးထုတ်ဝေသည်
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည် LG V23 Plus အထူးထုတ်လုပ်မှုကို JoJo's Bizarre Adventure manga စီးရီးများနှင့်အတူရောင်းချမည်
LG G7 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အချက်အလက်အသစ်များပေါက်ကြားခဲ့ခြင်း
LG G7: ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်ရန်မျှော်လင့်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
LG X4 အမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level range
LG X4 အမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level range ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ တောင်ကိုရီးယား၌စတင်မိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG သည် K10 နှင့် K10 Plus တို့ဖြစ်ပြီး low-end terminal နှစ်ခုကိုပြသသည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည် MWC တွင်ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုကိုစျေးကွက်နိမ့်ကျသော LG K10 နှင့် LG K10 Plus တို့အတွက်တင်သွင်းခဲ့သည်။
LG V30S ThinQ, အသစ်ထုတ်ထားသော V30 ကိုအကောင်းဆုံး AI နှင့်အတူ Mobile World Congress တွင်ပြသခဲ့သည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့၌ကျင်းပခဲ့သော Mobile World Congress ၏ရလဒ်အနေဖြင့်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာများအနက်တစ်ခုမှာ LG V25S ThinQ၊ အသစ်ပြန်လည် V30 ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အတူတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထောက်လှမ်းရေး၏အတုနှင့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လိမ့်မည်ဟုအများအပြားတိုးတက်မှုနှင့်အတူ။
LG K8 နှင့် LG K10 2018 - စွမ်းအင်ပိုမိုမြင့်မားစွာဖြင့်အနိမ့်အကွာအဝေးကိုသက်တမ်းတိုးသည်
LG K8 နှင့် LG K10 2018 - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်မိတ်ဆက်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှနိမ့်နိမ့်ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ယခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် LG သည် LG G7 ကိုမိတ်ဆက်မည်
LG G7 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအရဒီမော်ဒယ်လ်သည်ယခုနှစ်လယ်တွင်အထူးသဖြင့်ဇွန်လတွင်လွတ်လပ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်အလင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
LG V30 ကိုပန်းရောင် ရှိ၍ စပိန်၌မနက်ဖြန်မှရရှိနိုင်သည်
LG V30 ပန်းရောင်ကိုစပိန်တွင်မနက်ဖြန်မှရရှိနိုင်သည်။ ပန်းရောင်ဖြင့်အဆင့်မြင့်သောဖုန်း၏ဤဗားရှင်းအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည်တယ်လီဖုန်းဌာနခွဲများကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပိတ်သိမ်းတော့မည်ဖြစ်ရာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပထမဆုံးအနေဖြင့်ရပ်နားတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
LG G7 ကို ၂၀၁၁ Mobile World Congress တွင်တင်ပြမည်မဟုတ်ပါ
LG သည် LG G7 ကို Mobile World Congress ၂၀၁၈ တွင်ပြသမည်မဟုတ်ပါ။ မှတ်ချက်အမြောက်အများဖြစ်ပေါ်စေမည့်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား LG X4 Plus ၏စစ်ရေးလက်မှတ်နှင့်အတူမိုဘိုင်း၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
LG X4 Plus ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်တရားဝင်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာနမှကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စစ်ရေးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပေးခဲ့သည် ဒီကနေ Androidsis, ငါတို့အားလုံး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတင်ပြ
LG အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က LG G7 ကိုအစမှပြန်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်
LG အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က LG G7 ကို LG မှအစကတည်းကပြန်လည်ပြင်ဆင်ချင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြaboutနာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LG Q6 Plus နှင့် Q6 Alfa ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချလျက်ရှိသည်
LG Q6 Plus နှင့် Q6 Alfa ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်။ LG မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းနှစ်လုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
YouTube 12.44 သည်ယခုအချိန်တွင်ဗီဒီယိုကို ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဆွတ်ခူးနိုင်သည်
YouTube အက်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ထပ်အသစ်ပြောင်းခြင်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှိပ်လာသောအခါ 18:9မျက်နှာပြင်များအတွက်အထောက်အပံ့ကိုပေးလိမ့်မည်
LG သည် Android Oreo ကို LG V30 တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
LG မှယောက်ျားများသည် Samsung ကဲ့သို့အဆင့်များအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပြီး LG V30 တွင် Android Oreo ၏ပထမဆုံး beta ကိုစတင်စမ်းသပ်ရန်နောက်ဆုံးရက်ကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
LG V30 သည်ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုခံယူခဲ့သည်
LG V30 တွင်ထည့်သွင်းမည့်ကျော်ကြားသည့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းကို JerryRigEverything အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ စာမေးပွဲအောင်မလား
LG G6, LG G5, LG V20 အတွက်အခမဲ့အခင်းအကျင်းများကိုဘယ်လို download လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုမှန်ကန်စွာအသုံးချရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာ။
LG သည် OLED display များကိုအကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်
LG သည် OLED နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၄ င်းသည်အဓိကထုတ်လုပ်သူ ၄ ဦး မှသယ်ဆောင်နိုင်သည်
LG V30 ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာမှာရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်
ရက်ပေါင်းများစွာကြာသောကြောင့် LG V1.6 ကင်မရာ၏f/ 30 aperture သည်လူသိရှင်ကြားလိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
LG V30, IFA 2017 တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
LG V30 ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည် ၁၈: ၉ ရှုထောင့်ရှိ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ၆ လက်မဖန်သားပြင်အတွက်ထူးခြားသော LG ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်
LG V30 နှင့် Samsung Galaxy Note 8 - နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း
ယခုအခါတွင် LG V30 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီ ဖြစ်၍ Galaxy Note 8 နှင့် LG V30 တို့၏နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်သည်။
LG V30 အသစ်
တောင်ကိုရီးယား LG သည် LG V2017 အသစ်ကို IFA 30 fair-multimedia content တွင်ပျော်မွေ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်စွမ်းအားကြီးမားသည့်စမတ်ဖုန်းတွင်ပြသခဲ့သည်
LG V30 သည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအသံနှင့်မိုဘိုင်းဖြစ်နိုင်သည်
LG ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ LG V30 ရဲ့အသံစနစ်ကိုဂုဏ်ယူစွာဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၎င်းသည် HiFi Quad DAC အသံချစ်ပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများနှင့်ညီမျှမှုတစ်ခုယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
LG V30 မရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်, သင်မိုဘိုင်း interface ကိုသိနိုင်သည်
LG V30 ကိုတောင်ကိုရီးယား၏အထင်ကရအသစ်ဖြစ်သောဖြန့်ချိသည်အထိအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းယခုအချိန်တွင်မိုဘိုင်းအင်တာဖေ့စ်သည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
LG V30 Plus ကိုသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်
LG V30 Plus မှအချက်အလက်စီးရီးများပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်သမားရိုးကျမော်ဒယ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး၎င်းသည်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်နှင့်အသံအတွက်ထင်ရှားသည်
LG V30 သည်ဗီဒီယိုဗဟိုပြုသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်
LG V30 သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုနှင့်အသံအတွေ့အကြုံများကိုဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
LG က V30 မှာ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး Frame လျှော့ချမယ်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG ကသူ့ရဲ့နောက်ထပ် LG V30 မှာ ၆ လက်မအရွယ် OLED မျက်နှာပြင်ကို Corning Gorilla Glass6ကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မယ်လို့ကြေငြာလိုက်သည်
LG V30 အသစ်ကိုစက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
LG ၏အတွင်းပိုင်းစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကစက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ဥရောပအပါအ ၀ င် LG V30 အသစ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိမည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
LG V30: G Flex series ပြီးနောက်ပထမဆုံး LG OLED အကြောင်းသိထားရသမျှ
ယိုစိမ့်မှုအသစ်သည် LG V30 ၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်နေ့စွဲတို့ကိုညွှန်ပြသည်။
LG သည် G6 ၏အာမခံကို ၂ နှစ်အထိတိုးချဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် LG G6 ဖုန်းများအတွက်အာမခံချက်ကို ၂ နှစ်အထိတိုးချဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤအစီအစဉ်သစ်သည်အားနည်းချက်ရှိသော်လည်း
LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့မသန်မစွမ်းသည့် Android Rom ဖြင့်မည်သို့မွမ်းမံရမည်ကိုသင်ကြားပေးသော Android လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
LG G7 မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရည်တုလက်ထောက်နဲ့အတူရောက်လာနိုင်တယ်
LG အနေဖြင့်လာမည့်နှစ်တွင် LG G7 နှင့်အတူမိတ်ဆက်မည့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
LG G6 Pro နှင့် Plus တို့သည်ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး V27 သည်စက်တင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
LG G6 Plus နှင့် G6 Pro အသစ်များကိုယခုလတွင် LG မှဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံး Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားသည့် internal memory နှင့်အတူဖြစ်သည်။
Samsung နှင့် LG တို့က iPhone 8 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် Galaxy S6 နှင့် G8 မော်ဒယ်သစ်များကိုထုတ်လုပ်မည်
ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော iPhone 8 ကိုဖြန့်ချိရန် Samsung နှင့် LG က Galaxy S6 နှင့် G8 မော်ဒယ်သစ်များကိုဖြန့်ချိမည်။
LG V30 ၏အံ့မခန်းဖွယ်အယူအဆသည် Full Vision မျက်နှာပြင်နှင့်ထူးခြားသောအရောင်ကိုဖော်ပြသည်
LG V30 ၏အယူအဆသစ်သည် LG G6, ၅.၇ လက်မဖန်သားပြင် + အလယ်တန်းဖန်သားပြင်နှင့်အခြားအရာများအတွက်နောက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါသည့်ကိရိယာကိုညွှန်ပြသည်။
LG V30 သည် LG ၏ OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
OLED ဖန်သားပြင်များသည် LCD ဖန်သားပြင်များထက် ပိုမို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် LG သည်ယခုနှစ်တွင် OLED panel ဖြင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
LG X Power2ကိုနောက်ဆုံး၌ဇွန်လတွင်ဖြန့်ချိမည်
LG X Power2ကို ၄၅၀၀ mAh ဘက္ထရီဖြင့်ဇွန်လအစောပိုင်းတွင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားပြီးသုံးလနောက်ကျလိမ့်မည်။
LG G4 ၏အသုံးအများဆုံးပြproblemsနာ ၄ ခုနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။ ကင်မရာနှင့်ပြ,နာများ၊ နှေးနှေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းခြင်း။
LG G6 သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
LG G6 သည် Rube Goldberg ၏စက်ကိုနောက်ဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှုတွင်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးရေငွေ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်လက္ခဏာများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
LG G6 သည်သင်၏ဖန်သားပြင်ဖြစ်သည်
6: 18 format နှင့် Full Vision နည်းပညာတို့ပါ ၀ င်သည့် LG G9 ၏အထင်ကြီးဖွယ်မျက်နှာပြင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပြသပါမည်။
LG G6 ၏ပထမဆုံးတီဗီကြော်ငြာသည်ဤအချက်ပင်ဖြစ်သည်
LG G6 ၏ပထမဆုံးသောရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် ၁၈: ၉ format နှင့်အတူ terminal ၏ ၅.၇ လက်မ Full Vision မျက်နှာပြင်ကိုဖော်ပြသည်။
LG Watch Sport သည်အားကစားသမားအများစုအတွက်နာရီဖြစ်သည်
အခြားနှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Mobile World Congress ၏ဤနောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှုသည်အလွန်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားသည်။ ဒါ၏သက်သေသာဓကများမှာ ...
ဤဗီဒီယိုတွင် IP6 ရှိသည့်အပြင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသော LG G68 ၏ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
LG Watch Style, LG G နာရီသစ်
LG Watch Style ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို ၃ မိနစ်သာဗီဒီယိုဖြင့်ရှင်းပြသည်။ Android Wear3နှင့်အတူပါ ၀ င်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစမတ်နာရီ
ဥရောပရှိ LG G6 ၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းကိုလူသိများသည်
MediaMarkt ဂျာမနီမှစာရင်းတစ်ခုအရဥရောပရှိ LG G6 ၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိ LG G6 ၏စျေးနှုန်းသည်အမှန်ပင်ဆင်တူသည်။